भैंसेपाटीमा रामकुमारीहरु भिड्दा - हेल्लो चितवन अन्लाईन्
July 30, 2020 मा प्रकाशित (४ महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
आज बिहान भैंसेपाटी पुगेका युवा साँसदहरु जंगिए, ‘लास्टमा आएर फेरि तिनै मान्छे बोकेर हिँड्ने ? तपाईंलाई लाज लाग्दैन ? के गर्नुभएको यो ?’
उनीहरुले जवाफ पाए, ‘मलाई माधव बोक्नुछैन,प्रचण्ड बोक्नु छैन,केपी पनि बोक्नु परेको होइन । पार्टी त बोक्नुपर्यो नि ! सबैले एक–एकवटा नेता बोक्दै हिँडेपछि पार्टी कसरी जोगिन्छ ? आन्दोलन कसरी जोगिन्छ ?’ तर,उनीहरुले आफ्नो नेतासङ्ग प्रतिवाद गरिरहे, ‘तपाईं तुरुन्तै यो कदमबाट फिर्ता हुनुस् । यो हुँदै भएन । यस्तो पनि गर्ने हो ?’ ०५४ को विभाजनकालमा मालेको सहयात्री बनेका र अहिले माधव नेपाल पक्षमा लागेका युवाहरु बुधबार बिहान भैंसेपाटी पुगेर नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग यसरी असन्तुष्टि पोख्दै थिए ।
फेरि युवाहरुको पंक्तिबाट आपत्ति शुरु भयो, ‘खुब गर्नुभयो तपाईंले पार्टी जोगाउन । कसले पत्याएका छन्, वामदेवले पार्टी जोगाउन यसो गर्यो भनेर ? सबैले केपी ओलीसँग त्वं शरणम् गर्यो भनेका छन् । हो पनि त्यही ।’
ठाकुर गैरे,डा.दीपकप्रकाश भट्ट,रविन कोइराला,जीवनराम श्रेष्ठ,सुरेन्द्र मानन्धर,रामकुमारी झाँक्रीहरुको यो समूहमा सबभन्दा बढी रामकुमारीले चित्त दुखाइन् ।
डा.दीपकप्रकाश भट्टले हिजोको राष्ट्रवादी धारको सक्कली प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे आज समय परिस्थितिको चेपुवामा परेर राष्ट्रवादी हुन आएका मान्छेहरुसँग मिसिँदा हिजोको गौरव धुमिल हुने स्थिति आएको बताए । तर,वामदेवले उनीहरुका कुरामा सहमति जनाउनुभएन । र,पटकपटक टेबुल ठोक्नुभयो ।
भन्नुभयो, ‘मेरो प्रस्तावमा प्रचण्डलाई सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष बनाऔँ भन्ने कुरा छ । त्यो कुरा केपीलाई मन परेन । अब के म फेरि यो कुरा केपीलाई मन परेन भनेर सच्याउँदै हिँडौँ ? हुँदैन, त्यस्तो मबाट कदापि हुँदैन ।
उनले एक थान कुर्सीमा टाँसिइ रहने लोभमा पार्टी फुटाउन लागेको बेला राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको हिसाब गरेर हुँदैन । अहिले विधि,पद्दतिमात्रै भनेर पनि हुने स्थिति छैन । अहिले जसरी हुन्छ पार्टी जोगाउने,त्यसपछि अरु कुरा गर्ने…’ भन्दै आफ्नो कुरा राख्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । फेरि युवाहरुको पंक्तिबाट आपत्ति शुरु भयो, ‘खुब गर्नुभयो तपाईंले पार्टी जोगाउन । कसले पत्याएका छन्, वामदेवले पार्टी जोगाउन यसो गर्यो भनेर ? सबैले केपी ओलीसँग त्वं शरणम् गर्यो भनेका छन् । हो पनि त्यही ।’
फेरि अर्का युवाले आपत्ति जनाए, ‘गर्नुचाहिँ के भयो त कमरेड ? पटक पटक तपाईंलाई लात मार्ने उनै केपी ओलीलाई बोकेर फेरि अर्को लात खान तयार हुनुभयो हैन ? हामी त तपाईंले पटक–पटक लात खान नपरोस् भनेर चाहना गर्ने,कामना गर्ने कार्यकर्ता हौँ । हाम्रो पनि त कुराको कदर गर्नुस् ।’
अनि,वामदेवले निश्कर्षमा भन्नुभयो, ‘लात खाए पनि,बात खाए पनि खाऔँला । तर,मुख्य शर्त भनेको केपीको सनकमा पार्टी फुट्न नदिने हो । म पार्टी जोगाउने कुराको चिन्ता गरेर यो ६ बुँदे प्रस्ताव तयार पार्न तम्सिएको छु । यसमा अडिग छु । यदि केपीले केही गरी पार्टी फुटाए भने म उनको साथमा पनि हुने छैन ।”@Janaaasta Saptahik